izwe Rich kwamanzi eya eLwandle Olubomvu izivakashi ezivela kuwo wonke umhlaba. Amazing ubuhle kwamanzi uthanda ukuthuthukiswa diving. Kodwa izwe ngaphansi kwamanzi kuyinto zigcwele izingozi eziningi. Surgeonfish uyingozi wangempela zabo ezitholwe abatshuzi, ukutadisha coral. Wakhe ukwesaba konke.
Fish-udokotela ohlinza zintanta e olwandle olujulile nge "nommese" phezu umsila - abukhali neziqu bony. Ngo Phumula ummese-like spike aboshezelwa emzimbeni, neyezinhlanzi. Uma kwenzeka ingozi, yena elungisa phambili noma eceleni.
Kunezinhlobo ezingaphezu kuka-70 nezinhlobo zezinhlanzi ezingu. Bahlala ku-coral amanzi enamadwala ugu. Phakathi kwabo kukhona abashisekayo individualists indawo (Arabian Surgeon).
Lezi esiyingozi izinhlanzi Red Sea siqaphe ngentshiseko indawo yawo bangaphandle. Futhi uma kakade lihlehliselwe nezibiliboco ke lyutovat kuyoba ngendlela esabekayo. Ikakhulukazi ingozi-abanazo ame coral ipuleti, touch noma aphe izinhlanzi. Ukuhlaselwa abonakale "izingane" yakhe yokuqala, ezama ukuluma emaphikweni akhe kancane. Uma anqikaze ke, uyakwazi slash sina. Dodge engenamsebenzi - surgeonfish beshesha kakhulu.
Laba bameleli be-ezithakazelisa kakhulu lolu hlobo - izinhlanzi Unicorn, nge Ukwakha-ngesimo izimpondo ebunzini lakhe (e engu-lokuzala). ULwandle Olubomvu iyikhaya zinhlobo ezine sekusaziwa yithi unicorns.
Kungani lezi izinhlanzi spikes, izindwani, amapuleti abukhali nezimpondo? Odokotela Abahlinzayo abakujabuleli le isikhali esesabekayo okuzingela - abayikho herbivorous. Kodwa ngokushesha izindwani abukhali ukuze bazivikele ezilwaneni ezidla ezinye izilwane. Fish-ipuleti iqhubu futhi udokotela ohlinzayo ngimbone umsila. i ukuhlaselwa okunjalo by isifanekiso ngobukhulu kungabangela ukulimala kakhulu diver ukwazi. Kodwa iningi lalaba "scalpels" ukusiza izinhlanzi endaweni umbango nomakhelwane. Bangobani libukhali, okukhanya ezinkulu izimpondo, kakhulu "cool", nokuthi abalingani endaweni zidala oluhle, futhi ukondla kangcono.
Izwe kwamanzi eya eLwandle Olubomvu elicwile izidalwa eziningi ezinhle izidalwa engavamile. Izakhamuzi oLwandle Olubomvu akuzona ubuhle kuphela. Abaningi babo esiyingozi futhi enobuthi. Kodwa akufanele Yiqiniso, ngenxa yalokhu, senqabe uvakashele kule ndawo enhle. Badinga kuphela baqaphele futhi ngokuqapha ngenkathi ehlala emanzini futhi ogwini. Qaphela ikakhulu ngamatshe futhi ungatholi kubo - omunye wabo kungaba izinhlanzi. Ungahambi ekujuleni coral - endaweni oyintandokazi kwabaningi abakhileyo kolwandle yingozi.
Akumele ezingaphendulwanga aphe izinhlanzi nalo, nakuba curious kakhulu futhi asesabi ababhukudayo. Lokhu umdlalo ezibonakala zingasho lutho kungashintsha kube yinto embi kakhulu.
Aquarists kakhulu lezi izinhlanzi ngoba umbala wazo Flamboyant kanye nosayizi esincane. Kodwa ukuzigcina ekuthunjweni longitudinally eziyinkinga.
1. Ziyakwazi efunwa kakhulu ngokuya okuqukethwe. Aquarium kufanele bahlanzeke ngokuphelele ngaso sonke isikhathi. 2. Ngokwezimakethe etholakalayo inhlanzi-odokotela abahlinzayo, sabanjwa kolwandle, ngakho-ke kunzima ukuzivumelanisa nezimo ezintsha. 3. Abesilisa anonya maqondana omakhelwane yayo aquarium, niqonda kubo njengoba izimbangi. Bambalwa abantu uphathe ukudala zonke izimo ngoba ukuphila okunethezekile yalezi izinhlanzi engavamile.
Comet Encke. Okumangazayo futhi esiyivelakancane ubuhle cosmic
Capricorn futhi Sagittarius - Oluvumelana khona futhi kudingeke zilwe eziphikisanako
Isitho imbewu ukukhiqizwa kabusha e zezimbali. Indlela ukuzalela izitshalo